March 5, 2020 - Myitter
နောင်ပွင့်တော်မူမည့်_အရိမေတ္တေယျမြတ်စွာဘုရား ရှင်လက်ထက်တွင်_တရားထူးဟောမည်ဟူ ဗြာဒိတော်ရထားသည့် ဇလုံတောင်သမိုင်း ….
March 5, 2020 Myitter 0
ဇလုံတောင် တည်ရှိရာ‎နေရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကသာခရိုင်ဗန်းမောက်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး ဗန်းမောက်မြို့မှမြောက်ဘက် ၁၂ မိုင်ခန့် အကွာ တောအတွင်းပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၃ဝ၉ဝ မြင့်သောတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။ မြေပုံညွှန်းအက်စ်ဂျီ ၄၅၁၃၄၉ ဖြစ်ပါတယ်။တောတောင် လျှိုမြောင်များ နက်ရှိုင်းလှပါတယ်။ (ဇလုံတောင် ဘုရားသမိုင်း) ဂေါတမ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်သည် […]
ဦးဇင်းတစ်ပါးသည် Game အလွန်ကျွံဆော့ရာမှ စိတ်မနှံတော့ပဲ ထွက်ပြေးပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် အကူညီတောင်းခံခြင်း
မုဒုံမြို့နေပြည်သူများအား အကူညီတောင်းခံခြင်း မုဒုံမြို့ အသောကာ ရာမကျောင်းမှ ဦးဇင်းတစ်ပါးသည် Game အလွန်ကျွံဆော့ရာမှ စိတ်မနှံတော့ပဲ ဝေဒနာခံစားနေရာမှ ယနေ့နံနက်တွင် မုဒုံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ကျုံဖိုက်မေတ္တာမွန်တို့ပူးပေါင်း၍ …. အဆိုပါစိတ်မနှံသူအား နေအိမ်၌ သံကြိုးချည် လက်ထိပ်ခတ်ချုပ်နှောင်ထားပြီး ယနေညတွင် ရွာသာကြီးသို့ ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသောလည်း ယနေ့ညနေ ၆ နာရီချိန်ခန့်တွင် လက်ထိပ်များအား […]
ဧပြီလကုန် လူသားအကုန်လုံးဆန့်သွားနိုင်ပါတယ် ဝူဟန်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေမှာစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး ဟုတ်ပါတယ်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေမှာမစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့ကံမကောင်းရင် ဧပြီလကုန် လူသားအကုန်လုံးဆန့်သွားနိုင်ပါတယ် ဝူဟန်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး နာဆာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရအလျား ၂ မိုင်ခွဲခန့် (၄ကီလိုမီတာ)ရှိတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီးဟာ ကမ္ဘာကို ဦးတည်ပြီးလာနေပါပြီတဲ့ဒီဥက္ကာခဲကြီးရဲ့ အရွယ်အစားဟာ လူသားမျိုးနွယ်ကို ပျက်သုန်းအောင် လုံလောက်တဲ့ထုထည်ပမာဏရှိတယ် လို့လဲဆိုပါတယ် ကာလီဖိုးနီးယားမှာ ရှိတဲ့The Center for Near Earth Object […]
ပိုက်ဆံ ၅၀ နဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရင်သွေးတွေကို ကင်ဆာအဖြစ် ခံနေကြဦးမှာလား
ပိုက်ဆံ ၅၀ နဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရင်သွေးတွေကို ကင်ဆာအဖြစ် ခံနေကြဦးမှာလား ဒီမနက်ဆင်ရွာမှာ ဖိုးတရုပ်ကို သူ့အမေက ဈေးဆိုင်ကမုန့်ဝယ်ကြွေးတယ် ပုံမှာပါတဲ့အသားပြားမုန့်တဲ့ ၅၀ ကျပ်ပေးရတယ် သူ့အကို ဖိုးကတုံး ကပြောတယ် အဲ့တာတရုပ်မုန့်တဲ့ နေ့တိုင်းစားမှသေတာတဲ့ တခါတခါစားရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူးတဲ့.. သူ့ညီလေးကိုပြောပြနေတာ။ ကျွန်တော်ဘေး ကအသာနားထောင်ရင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ ဒီစာကိုရေးတယ် […]
အသကျက ၁၆ နှဈဗိုကျတဈလုံးနဲ့ ယောကျြားကထားခဲ့ ဗိုကျကလညျးမှေးခါနီးပွီး လကျထဲမှာလညျးပိုကျဆံမရှိ
အသကျက ၁၆ နှဈဗိုကျတဈလုံးနဲ့ ယောကျြားကထားခဲ့ အသကျက ၁၆ နှဈဗိုကျတဈလုံးနဲ့ ယောကျြားကထားခဲ့ ဗိုကျကလညျးမှေးခါနီးပွီး လကျထဲမှာလညျးပိုကျဆံမရှိ ဆေးခနျးလညျးမပွရ စားဝတျနရေေးကလညျးအဆငျမပွေ မောငျလေးဖွဈသူ အသကျ၁၃နဈတဈရကျ ၂၀၀၀ရတဲ့ပိုကျဆံနဲ့မှီခိုအားထားရတဲ့ဘဝ အမကေလညျးတှီဗှီရောဂါနဲ့ တျောတျောဆိုးတဲ့အဖွဈပါလားညီမလေးရယျ… မငျမငျကိုယျတိုငျမေးထားတာပါအားလုံးကိုလညျးမငျမငျ အကူအညီတောငျးခံပါတယျ ဒီကလေးမလေးကိုတတျနိုငျသလောကျဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွပါလို့ မငျမငျအကူအညီတောငျးခံပါတယျ ဗိုကျကလညျး ဒီမတျလထဲမှေးမှာမို့ မွနျမွနျအကူအညီလေးပေးကွပါလိုမတ်ေတာဂါရဝတောငျးခံအပျပါတယျခဗြာ အကူညီဆကျသှယျရနျဖုနျး […]
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ မိခင်ရော အမွှာသားလေး (၂)ဦးပါသေဆုံး …
စိတ်မကောင်းလိုက်တာမိခင်ရော အမွှာသားလေး (၂)ဦးပါသေဆုံးမှု ယနေ့ 5-3-2020 နံနက် ၆း၃၀ တွင်နောင်ပိန်(၄)ရပ်ကွက် နေ နန်းဋ္ဌေးဋ္ဌေးရီအသက်(၂၂)နှစ် သည် မီးဖွားရန်ကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံအသွား လမ်းခုလပ်တွင်ဘဝတစ်ပါးသို့ ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် DB အားကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မော်ကျူရီမှနောင်ပိန်တိုက်နယ်ဆေးရုံမော်ကျူရီသို့သွားရောက်သယ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိခင်နှင့်အတူ အမွှာ ယောက်ျားလေးရင်သွေးငယ် နှစ်ဦးပါ ဆုံးပါးခဲ့ရပါသည်။ ကွယ်လွန်သူ နန်းဋ္ဌေးဋ္ဌေးနှင့် ရင်သွေးငယ် […]
ဘာ့ကြောင့််ဖေါဖေါ ကျောက်ဖရုံအူကို သတိရပါ ….
ဘာကြောင့််ဖေါ ဖေါ သက်သာပျောက်ကင်းသောနည်း လေ့လာမိသမျှ သွေးေ ဖါ လေဖေါ ဆီးဖေါဆို၍ရှိသည်။အဖေါရောဂါဖြင့် အိပ်ရာထဲလဲနေသူကို မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးဆရာ ကြီးတစ်ဦး အာမခံဖြင့် ကုသည်ကိုမြင်ဖူးသည်။ အမှန်ပင်သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ ဆေးနည်း ကျောက်ဖရုံသီးအူနှင့် ကနဖော့ ပဉ္စငါးပါးသာဖြစ်သည်။ ကျောက်ဖရုံအူ တစ်စိတ်၏အူတိုင်ကိုထုတ်ပြီး ကနဖော့တစ်စီးဖြင့် ရေတစ်ဖလားထည့်ကာပြုတ်၍သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျန်သော ဆေးရည်ကို အဝတ်စဖြင့်စစ်ကာ ပုလင်းထဲထည့်ထားပြီး […]
မိုးညှင်းတွင် ရုတ်တရက်သေဆုံးသည့် ဝက်များကို မမြှုပ်ဘဲ ပြန်ရောင်းနေ ….
မိုးညှင်းတွင် ရုတ်တရက်သေဆုံးသည့် ဝက်များကို မမြှုပ်ဘဲ ပြန်ရောင်းနေ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ် နန်းမားမြို့မှာ မွေးမြူထားတဲ့ဝက်တွေ ရုတ်တရက်သေဆုံး နေတာကို မမြှုပ်ဘဲ ရောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ နန်းမားမြို့က မြို့နယ် တိမွေးကုဌာနနဲ့ ကျေးလက်လူငယ် (ကြက်ခြေပြာ) ဆင်းထားသူ ဦးတင်မောင်က “လွန်ခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကစပြီး ခုချိန်ထိ […]
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု မနိုင်မနင်းဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံ (၃)ခု နှင့် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များ
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု မနိုင်မနင်းဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံ (၃)ခု နှင့် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဆေးရုံတက်ရန် ခုတင်ရဖို့ စောင့်နေကြရပါတယ်။ မနေ့က ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒေဂူးမြို့ (Daegu) မှာ လူပေါင်း ၂၃၀၀ ဟာ ဆေးရုံကုတင်မရလို့ ယာယီနေရာမှာ ကုသနေရပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်း လူနာအသစ်တွေ့နှုန်း […]
ရွှေကူမြို့နယ်တွင် သေဆုံးသည့်ဝက်များ PCV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်ဟု အတည်ပြု
ကချင်ပြည်နယ်၊ ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်း ဝက်တွေသေဆုံးမှုဟာ PCV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရွှေကူမြို့နယ်မှာ ဝက်တွေသေဆုံးမှုကြောင့် တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဒေါက်တာဆန်းဝင်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်မှ မတ်လ ၃ ရက်နေ့အထိ ရွှေကူမြို့ အပါအဝင် ကျေးရွာတွေကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ဝက်တွေကို ဆေးကုတာ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေအပြင် […]